မန်းသားလေး| April 12, 2012 | Hits:3,593
| | မန္တလေး ကျုံးဘေးတွင် စကတ်အတို အင်္ကျီအပြတ်လေးတွေနှင့် ကာလာစုံ မန်းသူလေးများ သူ့ထက်ငါအပြိုင် ရေကစား နေကြသည်။ ဆောင်းဘောက် မျိုးစုံမှ သီချင်းသံမျိုးစုံကလည်း နားကွဲမထွက် ညံနေသည်။ သံစဉ်နှင့် စည်းချက်လိုက်ပြီး မန္တလေးသူ မန္တလေးသားများ ကိုယ့်မဏ္ဍပ်တွင် လူစည်ရန် လက်ကမ်း ကြော်ငြာများနှင့် ဆွဲဆောင်နေကြသည်။
“သံချပ်တွေမပါဘဲနဲ့တော့ သင်္ကြန်ဟာ မပြည့်စုံဘူး”နှစ်သစ်ကူး အမှတ်တရ စကားများနှစ်သစ် ခေတ်သစ်ဆီသို့လွှတ်သဘင် သင်္ကြန် သံချပ် နဲ့ …ကိုးကြိမ်မြောက် ရခိုင်ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပမည် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Ba Gyi April 13, 2012 - 12:09 pm	Citizen of Mandalay must aware the water is very precious especially during summer. I fully support the authority to control water consumption. Money impose on the using water without approval is too small. 50,000 Kyat ? Do you know what is the cost of water nowadays ? Not only authority, you all have the same responsibility to control, minimize waste of your own precious water sources. Don’t be ridiculous. !!!!
Reply	တခြားဖတ်စရာများ “သံချပ်တွေမပါဘဲနဲ့တော့ သင်္ကြန်ဟာ မပြည့်စုံဘူး”